Ganacsiyadu xaq uma laha deeqaha iyo qandaraasyada ay dowladdu maalgeliso haddii ay uga baahan yihiin dadka soo booqda inay keenaan caddeyn tallaal oo ka dhan ah COVID-19. Waxaa jira wax ka reeban xarumaha daryeelka caafimaadka, loo shaqeeyeyaashana wali waa loo oggolaan doonaa inay weydiistaan ​​shaqaalahooda haddii la tallaalay iyo in kale.
Dhanka kale, gobolku wuxuu kordhinayaa wacyigalinta si loogu dhiiri galiyo inbadan oo reer Iow ah inay helaan talaalka COVID-19.
Qiyaastii boqolkiiba 57 dadka waaweyn ee Iowa ayaa qaatay ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19. Taasi waxay la mid tahay lambarada qaranka. Ilaa iyo saaka, ilaa 32% dadka degan Degmada Woodbury ayaa si buuxda loo talaalay. Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu isku dayayaa inuu go'aamiyo haddii ay jiraan dad la aqoonsan karo oo aan la tallaalin.
Tyson Foods ayaa ku dhawaaqday inay ka fureyso xarunteeda caafimaadka "tijaabada" Storm Lake 26-ka Maajo. Storm Lake ayaa ka mid ah lix kale oo caafimaad oo tijaabo ah. Sida laga soo xigtay Tyson, rugaha caafimaad waxay daryeel caafimaad u fidin doonaan in ka badan 3,000 oo shaqaale ah oo ka shaqeeya dhirta Storm Lake iyo qoysaskooda.
(Saraakiisha caafimaadka gobolka waxay yiraahdeen haweeneyda koonfurta-bartamaha Nebraska ee si buuxda looga tallaalay COVID-19 ayaa u dhimatay cudurka.
Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Nebraska ayaa Arbacadii ku sheegtay war ay soo saartay in haweeneyda ay ku jirto 80s, ayna qabeen xaalado caafimaad oo hoose.)
Suuqa Beeraleyda Magaalada Sioux ayaa maanta si rasmi ah u furmay. Roob daadad wata ayaan ka hor istaagin qulqulka dadka inay hubiyaan wax soo saarka, dhirta, cuntada, iyo waxyaabaha kale ee la bixiyo.
Suuqa Beeraleyda wuxuu socdaa Arbaco kasta iyo Sabti ilaa iyo dhammaadka Oktoobar laga bilaabo 8-da subaxnimo illaa 1-da duhurnimo.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa xaqiijiyay laba xaaladood oo ah nooc ka mid ah COVID-19, oo inta badan loo yaqaan kala duwanaanshaha Hindiya, ee…